[SOMALI] Shuruudaha Waji Daboolka iyo Talooyinka | News & Blog | KFAI - Minneapolis + St. Paul
[SOMALI] Shuruudaha Waji Daboolka iyo Talooyinka
May 17, 2021 - Posted in General Announcements by Miriam X.
Gudoomiye Walz ayaa bisha Mey 13keedii joojiyey sharcigii dadka ku qasbayey in ay afka dabooshaan. Waxaan weli darseynaa waqaalada la xiriira is bedelka ku yimid sharciga afdaboolka, inaga ayaana idin la wadaagi doonaa wixii soo kordha maalmaha soo socda.
WAXAA LA CUSBOONAYSIIYAY FEBRAAYO 12, 2021 Tan iyo ilaa bisha Julaay 25, 2020, sida ku xusan Amarka Fulinta Guddoomiyaha ee 20-81, dadka ku nool Minnesota waxaa laga rabaa inay xirtaan weji dabool dhammaan gudaha ganacsiga iyo goobaha dadweynaha ee gudaha ah, haddii uusan kali ahayn qofku. Intaa waxaa dheer, shaqaalaha waxaa looga baahan yahay inay xirtaan weji daboolka marka ay ka shaqeynayaan bannaanka xaaladaha kala fogaynta bulshada aan la joogtayn karin. Lagasoo bilaabo 18ka bisha Diseembar, 2020, saacaduna tahay 11:59 p.m., Amarka Fulinta 20-103 ayaa qasab ka dhigaaya waji daboolka oo lagu xirtoo meelo iyo xaalado dheeraad ah, ayna ku jirto in la xirtoo markasta marka aad joogto jiimka ama xarunta jir dhiska—xataa marka aad jimicsiga ku jirto. Cilmi baaris ayaa muujisay in isticmaalka daboolidda wejigu ay si weyn hoos ugu dhigi karto halista cudurka marka lagu daro dadaalada kale ee kahortagga sida kala fogaanta bulshada iyo nadaafadda gacanta. Wixii macluumaad dheeri ah oo ku saabsan daboolidda wajiga iyo Amarka Fulinta, fadlan eeg Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo ee Ku Saabsan Baahida loo Qabo in la Xirto Daboolada Wajiga.
Noocyada daboolka wajiga
Noocyada waji daboolka waxaa ku jiri kara maaskarada xaashida ama la iska tuuri karo, maaskaro maro ah, marada qoorta, qoor xir, bandanna, ama waji daboolka diinta. Tusmada faahfaahsan ee farsamooyinka ugu wanaagsan ee noocyada waji daboolka iyo sida loo xirtaba, fadlan ka fiiri Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo ee Ku Saabsan Baahida loo Qabo in la Xirto Daboolada Wajiga.
Daboolidda wejiga waa inuu si buuxda u daboolaa afka iyo sanka. Daboolku waa inuusan ahaanin mid aad u adag ama xaddidan oo waa in la dareemaa raaxo inta la xidhan yahay.
Maaskaro kasta oo lagu daro tuubo loogu talagalay in lagu fududeeyo neefsashada, maaskarada shabaga ah, ama maaskarada furan, daloollo leh, meelo banbanaan oo muuqda leh ee naqshadda ama walxaha, ama daboollada ma aha daboolid wejiga ku filan maxaa yeelay waxay u oggol yihihiin dhibcuhu inay ka soo baxaan maaskarada.
Daboolidda wejiga laguma beddelanayo kala fogaanta bulshada, laakiin gaar ahaan waa mid muhiim ah marka la ilaalinayo ugu yaraan masaafo ay u jirsadaan oo ah 6-foodh shakhsiyaadka kale ee aan ka tirsanayn isla hal qoys suuro gal ma ahan.
Lama oga in gaashaanka wejigu (caag cad oo daboola wejiga) uu bixiyo il xakamaysa dhibcaha oo lamid ah waji daboolka, laakiin waxaa laga yaabaa inay ikhtiyaar u noqdaan xaaladaha xidhasada waji daboolku uu dhibaato yahay. Difaaca ugu habboon, gaashaankuna waa inuu ku fidsanaadaa ilaa gadhka hoostiisa iyo dhegaha, waana inuusan jirin banana u dhexeeya wajiga hore iyo madaxa gaashaanka.
In kasta oo darajada caafimaad maskarooyinka (tusaale ahaan, waji-xidhka qalliinka, neefsiyada N95) ay yihiin daboollo waji oo ku filan, xubnaha dadweynaha ee aan ka shaqeyn daryeelka caafimaadka ama shaqo u baahan qalab difaac heer-caafimaad (tusaale ahaan, xirfadaha dhismaha qaarkood) ayaa ka niyad jabay inay xidhaan maadaama ay tahay in loo qoondeeyo shaqaalahaas.
Dadka laga dhaafay shuruudaha waji daboolidda
Caruurta kayar da’da 2 sano ma aha inay xirtaan daboolka wajiga. Caruurta da’doodu u dhaxayso 2 iyo 5 sano loogama baahna inay xidhaan waji daboolidda, laakiin waxaa lagu dhiirigeliyaa inay xidhaan weji daboolka markay joogaan goobaha dadweynaha haddii ay si ficil ah u sameyn karaan iyagoo raacaya tilmaamaha CDC (yacni, iyada oo aan inta badan la taaban ama wejiga laga saarin daboolidda).
Dadka leh xaalado caafimaad ama xaalado caafimaad oo kale, naafo ama caafimaad dhimir, baahiyo korriimo, ama dhaqan leh taasoo adkeyneysa in loo dulqaato xirashada weji daboolka.
Qofkasta oo dhibaato ka haysato neefsashada, miyir beela, hurdo ku jirto, tabar daran, ama haddii kale aan awood u lahayn inuu weji daboolka iska qaado caawimaad la’aan.
Dadka goobta shaqadooda markii ay xiran yihiin weji daboolka waxay u abuuri karaan amni katarta qofka ama dadka kale sida ay go’aaminayaan maamulayaasha maxalliga ah, gobolka, ama federaalka ama tilmaamaha amniga goobta shaqada.
Beddelka waji-xidhka sida gaashaan waji oo saafi ah ayaa loo qaddarin karaa kuwa qaba xaalado caafimaad ama xaalado ay xirtaan maaskaro dhibaato ku ah. gaashaanka wejiga sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa bedel ahaan daboolidda wajiga marka si gaar ah loogu oggolaado Hagaha Wershadaha ee lagu dabaqi karo ee laga helo Stay Safe Minnesota.
Goorma ayaa loo baahanyahay in la xirto daboolka wajiga
Dhammaan ganacsiyada gudaha iyo bannaanka hore ee dadweynaha, oo ay ku jiraan marka aad dibadda ku sugayso si aad u gasho gudaha goob dadweyne ama ganacsi.
Markaad fuushan tahay gaadiidka dadweynaha sida basaska ama tareennada, ama tagsi, gaadiid la wadaago, ama gaari loo adeegsado ujeedo ganacsi.
Loogu talagalay shaqaalaha oo keliya: Markii aad ka shaqeyneyso bannaanka xaaladaha kala fogaynta bulshada (tusaale ahaan, ujirsashada masaafada jireed ugu yaraan lix fiit shaqsiyaadka kale ee aan isku guri ahayn) aan la jogtayn karin.
Markaad ku sugan tahay meherad, ha noqoto gudaha ama ha noqoto banaanka, taasi waxay leedahay baahi dheeraad ah oo daboosho wejiga. Ganacsigu waxaa loo ogol yahay inay u baahan yihiin daboolid wajiga xitaa markay jiraan xaalado aan daboolidda wajiga uusan farayn Amarka Fulinta 20-81.
Markay hagitaanka warshadaha ku habboon, laga heli karo Stay Safe Minnesota khaas ahaan waxay u baahan tahay daboolid wajiga (tixraac qaybta hagidda gaarka ah ee warshadaha, hoosta).
Marka daboolka wajiga aan loo baahnayn
Marka la joogo guriga ama qolka loo qoondeeyay ama qol lagu noolaado oo ku yaal meel ku-meelgaar ah (tusaale ahaan, huteel ama qol huteel) ama meel kale oo uu qofku deggenaan karo muddo-gaaban ama waqti dheer (tusaale ahaan, hoyga, kuleejo, xarunta daaweynta deganaadayaasha, xarunta daryeelka muddada-dheer, xarunta asluubta).
Hasayeeshee, shaqaalaha soo gala guri qof ama guri loo qoondeeyay ujeedo shaqadooda – tusaale ahaan, kaaliyaha gargaarka daryeelka caafimaadka guriga ama shaqaalaha dadweynta guriga, daryeelka muddada-dheer, ama xarunta asluubta – waa inay xirtaan daboolidda wajiga markay saas samaynayaan. Xarumaha qaarkood — oo ay ku jiraan cisbitaalada, hoyga, xarumaha daryeelka muddada-dheer, barnaamijyada deganaanshaha ee shatiyeysan ee hoos imanaya Xeerarka Minnesota cutubka 245D, xarumaha daaweynta degenaadayaasha, ama xarumaha asluubta — waxay sidoo kale u baahan karaan booqdeyaasha iyo deggeneyaasha, bukaannada, ama maxaabiista inay xirtaan daboolka wejiga xitaa markay ku jiraan qolka ay ku noloyihiin.
Markii gaari gaar loo leeyahay loo adeegsanayo ujeeddooyin gaar ah (tusaale ahaan, ganacsi aan ahayn).
Markaad dibadda joogtid ama aad kaqeybqaadaneyso madadaalada dibedda (tusaale, jimicsiga, socodka, beero ka shaqeynta) ujeeddooyin gaar ahaaneed. Hasayeeshee, shaqaalaha waxaa laga rabaa inay xirtaan daboolidda wejiga markay bannaanka ka shaqnayaan xaalaha kala fogeynta bulshada aan la joogtayn karin.
Xitaa xaaladaha aan daboolidda wajiga looga baahneyn, dadka oo dhami waa inay wataan wejiga daboolka si ay ugu diyaar garoobaan wada-xiriirka dadka kale ama inay galaan goobo gudaha ah.
Marka daboolka wajiga si kumeelgaar ah looga saari karo
Markaad wax cunayso ama wax cabaysid, haddii aad jirahaan ka fogaan karto masaafo 6 fiit ah dadka kale ee aydaan ahayn isku dhinac.
Markii qof weyddiisto inuu caddeeyo aqoonsiga ujeeddooyinka sharciga ah, sida markii amar lagu siinayo khamri ama galitaanka munaasabado gaar ah.
Markaad kaqaybqaadaneyso hawlo wejiga daboolka qoyan doona. Tusaale ahaan, marka dabaasha.
In kasta oo aad la xiriirayso qof dhago la’a ama dhego culus, ama leh xaalad caafimaad, naafonimo, ama xaalad caafimaad maskaxeed oo ka dhigaysa inuu qofkaas la xiriiro asaga oo xiran maaskaro wax adag, waxad samaysaa inaad joogtayso ka fogaaanta bulsho illaa inta suurogal ah ee udhaxeysa dadka aan ka tirsanayn hal qoys.
Inta aad helayso adeeg — oo ay kujirto baaritaan ilko ama hanaan, baaritaan caafimaad ama habsocod, ama adeeg daryeel qof ahaaneed — oo aan la qaban karin ama ay adkaan laheyd in la qabto markii shaqsiga helaya adeeggu uu xiranyahay weji dabool.
Markuu keli yahay, sida marka aad xafiis ka shaqeyneyso ama afar dhinacle derbiyo leh oo ka sareeya wajiga marka kala fogaanta bulshada la jooogtayn karo, oo ay ku jiraan, meelaha gudaha ee ku lifaaqan, baabuurka dhexdiisa, ama xayndaabka qalabka culus ama mashiinnada. Xaaladaha noocaas ah, dadku wali waa inay wataan wejiga daboolidda si ay ugu diyaar garoobaan inay xidhaan marka aanay kali ahayn.
Markii aad ka marag kacayso, hadleyso, ama aad ka hadlaysid meherad gudaha ah ama meel banaan oo dadweyne ah, marxaladaha ama goobaha sida tiyaatarada, shirarka wararka, dhageysiga maxkamada, ama casharada, waxaa la siiyaa in fogeynta bulshada marwalba la ilaaliyo. Difaaca wejiga waa in loo tixgaliyaa inuu yahay bedel xaaladahan oo kale.
Inta lagu gudajiro waxqabadka ama bandhigyada ganacsiga gudaha ama bannaanka dadweynaha markii wejiga daboolka aan la adeegsan karin inta lagu ciyaarayo aalad muusig, waa haddii fogeynta bulshada marwalba la ilaaliyo.
Markii si xoog leh lagula talinayo (laakiin aan loo baahnayn) in la xidho wejiga daboolka
In Meherad kasta oo bannaanka ah ama bannaanka dibedda markii ay suuroggal ahayn in la ilaaliyo 6 fiit oo masaafad jireed ka fog kuwa kale ama ay is-dhexgalka qof-qof u dhow ay suurtogal tahay ama ay suuragal tahay, sida marka ay soo geleyso ama ka baxayso meherad, wareejinta gudaha la seexdaan dad kale oo goob joog ah, adigoo isticmaalaya musqusha, dalbashada cuntada, ama saf ku sugaya.
Kulamada bulshada ee gaarka loo leeyahay – tusaale ahaan, markii aad ku booqaneysid guri khaas ah asxaab ama ehelo aan degen hal guri — gaar ahaan markii aysan suurta gal aheyn in la ilaaliyo 6 fiit masaafada jireed ee dadka kale.
Guriga dhexdiisa, shaqsiyaadka la kulmay astaamaha COVID-19. Tani waxay ka caawin doontaa ka ilaalinta xubnaha kale ee isla hal qoys in ay cudurka qaadaan.
Markaad guriga joogtid ama gaari gaar loo leeyahay marka qof aan xubin ka ahayn isla hal qoys joogo, gaar ahaan marka kala fogeynta bulshada aan la sii wadi karin.
Waajibaadka ganacsiyada ee hoos yimaada Amarka Fulinta
Marka loo eego Amarka Fulinta ee 20-81, ganacsiyada waa inay:
Waxay u baahan yihiin in dadka oo dhan, ooy kujiraan shaqaalahooda, macaamiishooda, iyo soo booqdeyaasha, ay xirtaan daboolidda wajiga sida ay farayaan Amarka Fulinta 20-81 isla markaana ay qaadaan tillaabooyin macquul ah si ay u meel mariyaan shuruuda.
Yaraynta ama meesha ka saaridda in shaqaalaha iyo macaamiisha ay soo gaadhaan dadka aan xiri karin ama diida inay xirtaan weji baboolka.
Cusbooneysiiya Qorshahooda Diyaarinta COVID-19 si loogu daro wejiyada daboolaya shuruudaha Amarka Fulinta ee 20-81, u wargaliya shaqaalahooda sida qorshahooda loo cusboonaysiiyay, ugana dhigo qorshaha dib loo eegay inay helaan shaqaalahooda.
Dheji hal ama in ka badan astaamo u muuqda dadka oo dhan – ooy kujiraan shaqaalaha, macaamiisha, iyo booqdayaasha – kuna amraya inay xidhaan wejiga daboolidda sida uu farayo Amarka Fulinta ee 20-81.
Markay suurtagal tahay, u fidiya guryo dadka, oo ay kujiraan shaqaalahooda iyo macaamiishooda, kuwaasoo sheega inay qabaan xaalad caafimaad, xaalad caafimaad maskaxeed, ama naafo ah taasoo ka dhigeysa wax aan macquul ahayn qofka inuu ku sii wado weji daboolidda. La qabsiyada waxaa ka mid noqon kara oggolaansho nooc kale oo dabool wajiga ah – gaashaanka wejiga, tusaale ahaan — ama bixinta ikhtiyaarrada adeegga ee aan u baahnayn macaamil inuu galo ganacsiga.
Amarka Fulinta ee 20-81 ma aha in:
Looga baahanyaay ganacsiyada ama shaqaalahooda inay fuliyaan shuruudaha daboolka wejiga marka aysan aamin aheyn in sidaas la sameeyo.
Farayso ganacsiyadu in ay xakameeyaan, weeraraan, ama jirkooda ka saaraan shaqaalaha ama macaamiisha diida inay u hogaansamaan Amarka Fulinta ee 20-81 markii aysan sii kale sharci noqonaynin in sidaas la sameeyo.
Oggolaadaan ganacsiyada iyo shaqaalahooda inay ku xadgudbaan shuruucda kale, oo ay ku jiraan sharciyada ka hortagga takoorka.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan talaabooyinka ganacsiyada ay qaadi karaan si loo hubiyo u hogaansanaanta Amarka Fulinta 20-81, tixraac Amarka Fulinta 20-81 kaas oo laga heli karo Executive Orders from Governor Walz, and the Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo ee Ku Saabsan Baahida loo Qabo in la Xirto Daboolada Wajiga.
In kasta oo Minnesota ay filayso in ganacsatada iyo shakhsiyaadku ay si iskood ah u hoggaansami doonaan shuruudaha hagitaan iyo Amarka Fulinta ee 20-81 si loo ilaaliyo walaalahooda kale ee reer Minnesota, waxaa jira cawaaqib xumo ku xadgudubta shuruudahan. Cawaaqib xumadaani waxaa ka mid noqon kara sheegashooyinka yar-yar ee dambi-dhaafka ah iyo ganaaxyada dadka, iyo dambiyada, madaniga, iyo ganaaxyada sharciyeynta ganacsiyada (iyo milkiileyaashooda iyo maareeyayaasha). Wixii macluumaad dheeraad ah, ka eeg Amarka Fulinta 20-81 ee laga heli karo Amarka Fulinta 20-81 kaas oo laga heli karo Executive Orders from Governor Walz, and the Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo ee Ku Saabsan Baahida loo Qabo in la Xirto Daboolada Wajiga.
Halkee looga soo warbixiyaa tabashooyinka la xiriira hoggaansanaanta ama weydiinta su’aalaha?
Waxaa jira dad laga yaabo inaysan awoodi karin inay xirtaan weji daboolidda sababo kala duwan awgood oo laga yaabo inaadan u sheegi karin sabab kaliya adoo eegaya qof. Haddii aanad ahayn ganacsi mas’uul ka ah xaqiijinta shaqaalaha iyo u hogaansanaanta Amarka Fulinta, ha u dirin dadka kale dowlada ama maamulada maxalliga ah, oo ay ku jirto fulinta sharcigu. Haddii aad tahay ganacsade oo aad caawimaad ugu baahan tahay la-macaamilka booqdayaasha ama macaamiisha aan u hoggaansamin, waxaad jeclaan kartaa inaad la xiriirto hay’adda fulinta sharciga ee deegaanka si lagaaga caawiyo haddii aadan awoodin inaad u hoggaansanaanta qaab kale u hesho. Si aad ugu soo warbixiso xadgudubyada ganacsiyada: La xiriir meelmarinta sharciga maxalliga ah ama mid ka mid ah hay’adaha hoos ku taxan, haddii lagu dabaqi karo.
Si aad u weydiiso su’aalo ama aad u soo sheegto xad-gudubyada Amarkan Fulinta ee la xiriira caafimaadka iyo badbaadada shaqaalaha: Cinwaanka emailka kala xiriir Waaxda Shaqaalaha iyo Warshadaha iimaylka osha.compliance@state.mn.us ama telefoonka 651-284-5050 ama 1-877-470-6742.
Si aad u weydiiso su’aalaha kale ee la xiriira goobta shaqada ee ku saabsan Amarkan Fulinta: La xiriir Waaxda Shaqada iyo Horumarinta Dhaqaalaha adiga oo isticmaalaya foomka bogga internetka soo socda: Questions about Returning to Work.
Si aad uga warbixiso xadgudubyada maqaayadaha iyo xarumaha adeegga cuntada, barkadaha, ama adeegyada hoyga: Raac tilmaamaha ku yaal MDH Online Complaint Form. Xaaladaha qaarkood, waxaad u baahan kartaa inaad la xiriirto hay’adda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka si aad u soo sheegtid cabashadaada. Tixraac “Kahor intaadan soo gudbin cabashada” bogga websaydhka sare ama ka Minnesota State and Local Food, Pools, and Lodging Contacts (PDF) si loo go’aamiyo in hay’adda caafimaadka dadweynaha ee deegaanka ay tahay xiriiriyaha saxda ah ee deegaankaaga.
Si aad uga warbixiso takoorista la xiriirta Amarkaan Fulinta: La xiriir Waaxda Xuquuqda Aadanaha ee Minnesota lambarka 1-833-454-0148 ama soo gudbi warbixin Report Discrimination Online.
Su’aalaha guud ee ku saabsan shuruudaha daboolidda wajiga ama COVID-19: Kala xiriir Waaxda Caafimaadka Minnesota telefoonka 1-833-431-2053, ama soo gudbi su’aasha adigoo isticmaalaya Have a Question? We’re here to help online form.
Tilmaamo dheeri ah: Daryeel cunug, Dugsiyda K-12, iyo machadyada tacliinta
Amarka Fulinta ee 20-81 wuxuu dejiyaa shuruudo kala duwan ama dheeraad ah, ka-reebitaanno, iyo talooyin ku saabsan daryeelka carruurta, iskuulada K-12, iyo machadyada waxbarashada sare. Macluumaad dheeri ah, fadlan ka eeg Amarka Fulinta 20-81 ee Executive Orders from Governor Walz, Waaxda Caafimaadka ee Minnesota Su’aalaha Badanaa La Isweydiiyo ee Ku Saabsan Baahida loo Qabo in la Xirto Daboolada Wajiga iyo hagitaan gaar ah oo loogu talagalay goobaha ee bogagga internetka e soo socda:
Goobaha daryeelka ilmaha ayaa looga baahan yahay inay u hoggaansamaan daboolka wejiga iyo hagidda gaashaanka wejiga laga ee laga heli karo Masking Recommendations for Child Care: COVID-19.
Dugsiga barbaarinta ilaa fasalka 12aad ee dugsiyada waxaa looga baahan yahay inay u hoggaansamaan daboolka wejiga iyo hagidda gaashaanka wejiga laga heli karo 2020-2021 Planning Guide for Schools (PDF).
Machadyada tacliinta sare waxaa looga baahan yahay inay u hogaansamaan wajiyada iyo hagidda gaashaanka wajiga ee laga heli karo Institutes of Higher Education (IHE): COVID-19.
Tilmaanta-warshadaha u gaarka ah
Amarka Fulinta ee 20-81 wuxuu u baahan yahay daboolid wajiga in la xirto markii si gaar ah loogu baahan yahay hagidda warshadaha ee laga heli karo Stay Safe Minnesota. Tilmaamaha soosocda ee warshadaha ugaarka ahi waxay soo rogaysaa shuruudo waji daboolid oo dheeri ah, sida uu farayo Amarka Fulinta, oo ay tahay inay raacaan ganacsiyada iyo shaqaalaha warshadahaas:
Makhaayadaha iyo Baararka
hagidda warshadaha ee lagu dabaqi karo waxay u baahan tahay:
Dhammaan shaqaalahu inay xirtaan daboolka wejiga qayb kasta oo ka mid ah maqaayadda ama baarka, ha noqoto gudaha ama bannaanka, haddii aanu shaqaaluhu kaligiis ka shaqeynayn xafiis ama meel kale oo ku lifaaqan ama meel gooni ah oo aan cuntada lagu kaydin, qabaybin, ama lagu diyaarin.
Shaqaaluhu waa inay xirtaan gaashaanka wajiga marka wejiga daboolka aan la xiran karin, sida marka ay ka shaqeynayaan jikooyinka kulul.
Tixraac COVID-19 Preparedness Plan Requirements for Restaurants and Bars (PDF) talo bixin dheeri ah oo ku saabsan shuruudaha quseeya baararka iyo makhaayadaha.
Tafaariiqda iyo Adeegyada Daryeelka Shakhsiyeed
Labada gooboodbada tafaariiqda iyo adeegyada daryeelka shaqsiyadeed, hagidda lagu dabaqi karo waxay u baahan tahay in, haddii adeegga la qabanayo uu u baahan yahay macmiilku inuu ka saaro daboolka wejiga, shaqaalaha waa inuu xirtaa labadaba weji daboolka iyo gaashaanka wejiga. Tixraac boggagga soosocda ee hagista dheeriga ah ee ku saabsan shuruudaha ku habboon warshadahaas:
Stay Safe Guidance for Personal Care & Salon Businesses
Stay Safe Guidance for Retail Businesses